Windows | December 2019
Xhuma bese ulungisa abaqaphi ababili ku-Windows 10
Ukukhetha Komhleli December 12,2019
I-Windows-tablet NEC VersaPro VU ithole iphrosesa Celeron N4100
I-NEC yenkampani ithumele ikhompyutha ye-tablet VersaPro VU, ngokusekelwe ku-Windows 10. Phakathi kwezici eziyinhloko zomkhiqizo omusha kuyinhlangano ye-Intel Gemini Lake yabacubungula ne-modem ehlanganisiwe ye-LTE. I-NEC VersaPro VU ifakwe isikrini esingu-10.1-intshi ngesinqumo sama-pixels angu-1920x1200, intambo ye-Intel Celeron N4100 ye-Quad, 4 GB ye-RAM no-64 noma i-128 GB yememori engunaphakade.
Indlela yokulungisa i-Windows 10 bootloader
Ukungasebenzi kwe-Windows 10 bootloader kuyinkinga yokuthi wonke umsebenzisi walesi simiso sokusebenza angabhekana nayo. Naphezu kwezimbangela ezihlukahlukene zezinkinga, ukubuyisela i-bootloader akuyona neze nzima. Sizolinga ukuthola ukuthi singabuyisa kanjani ukufinyelela ku-Windows futhi sivimbele ukuthi kwenzeke ukukhubazeka futhi.
Indlela yokubuyisela iphasiwedi ku-laptop
Iphasiwedi kumakhompuyutha noma ikhompyutha ephathekayo yindlela esemqoka futhi ephumelelayo kakhulu yokunciphisa ukufinyelela okungagunyaziwe kwedatha yomuntu siqu yomnikazi wesistimu yokusebenza nedivayisi. Njengengxenye yale myalelo, sizochaza ngokuningiliziwe ukuthi yiziphi izindlela futhi ngaphansi kweziphi izimo kungenzeka ukuthi kubuyiselwe.
Ukurekhoda ividiyo kusuka kumakhamera wewebhu
Ngezinye izikhathi abasebenzisi badinga ukurekhoda ividiyo kusuka kumakhamera wewebhu, kepha akubona bonke abakwazi ukukwenza. Esihlokweni samanje, sizobuka ngezindlela ezahlukene ukuthi noma ubani angakwazi ukusithatha ngokushesha isithombe kusuka kwikhamera yewebhu. Ukudala ividiyo kusuka kumakhamera wewebhu Kunezindlela eziningana zokukusiza ukurekhoda kwikhamera yekhompyutha.
Lungisa izimbangela zephutha le-0xc0000005 ku-Windows 7
Uhlelo lokusebenza lwe-Windows, okuyinto isofthiwe enzima kakhulu, lungasebenza ngamaphutha ngezizathu ezihlukahlukene. Kulesi sihloko sizoxoxa ukuthi singalungisa kanjani inkinga ngekhodi 0xc0000005 uma sisebenzisa izinhlelo zokusebenza. Iphutha ekulungiseni 0xc0000005 Le khodi, eboniswa ebhokisini lengxoxo lesiphambeko, isitshela ngezinkinga ezikulo lokusebenza ngokwayo noma phambi kwazo zonke izinhlelo zokuvuselela ohlelweni oluphazamisa ukusebenza okujwayelekile.
I-Windows 8 yabaqalayo
Kulesi sihloko ngizoqala isifundo noma isifundo ku-Windows 8 kubasebenzisi be-novice abaningi abaye bafaka ikhompyutheni kanye nalesi simiso sokusebenza maduzane. Izifundo ezingaba ngu-10 zizohlanganisa ukusetshenziswa kwesistimu entsha yokusebenza kanye namakhono ayisisekelo okusebenza nayo - ukusebenza nezicelo, isikrini sokuqala, ideskithophu, amafayela, izimiso zomsebenzi ophephile nekhompyutha.
Ukusheshisa kwamageyimu ku-Windows 7, 8, 10 - izinsiza ezihle kakhulu nezinhlelo
Ngezinye izikhathi kwenzeka ukuthi umdlalo uqala ukunciphisa ngaphandle kwesizathu esizwakalayo: insimbi ihlangabezana nezidingo zesistimu, ikhompiyutha ayilayishwe imisebenzi engaphandle, futhi ikhadi levidyo neprosesa ayifuni. Ezimweni ezinjalo, ngokuvamile, abasebenzisi abaningi baqala ukona ku-Windows. Emizamweni yokulungisa izigxobo nokudabuka, abaningi babuyisela uhlelo ukuhlanza amafayela angenalutho, faka enye i-OS ngokufana nomsebenzi osebenzayo bese uzama ukuthola inguqulo yomdlalo ophambili kakhulu.
Buyekeza abashayeli ku-Windows 7
Ukuze kusetshenziswe kahle amadivaysi axhunyiwe kwikhompyutha, kubalulekile ukulondoloza ukufaneleka kwesofthiwe enikeza ukuxhumana phakathi kwe-hardware nesistimu yokusebenza. Isofthiwe enjalo ngumshayeli. Ake sichaze okukhethwa kukho okuhlukahlukene ukuze kubuyekezwe i-Windows 7, efanelekayo ngezigaba ezahlukene zabasebenzisi.
Ungavula kanjani i-Wi-Fi ku-Windows 7
Izinkinga ngamanethiwekhi angenantambo aphakama ngezizathu ezihlukahlukene: imishini yenethiwekhi engalungile, abashayeli abafakiwe ngokungalungile, noma imodemu ye-Wi-Fi ekhutshaziwe. Ngokuzenzakalelayo, i-Wi-Fi ihlale inikwe amandla (uma ngabe ukushayela okufanele kufakwe) futhi akudingi izilungiselelo ezikhethekile. I-Wi-Fi ayisebenzi Uma ungenayo i-intanethi ngenxa ye-Wi-Fi ekhubazekile, khona-ke ekhoneni elingezansi kwesokudla uzoba nalesi sithonjana: Kubonisa ukuthi imodemu ye-Wi-Fi ivaliwe.
Ukuxhumeka okulungile kwe-gamepad kwikhompyutha
Akuwona wonke amageyimu wekhompyutha, ikakhulukazi lawo adluliselwa ku-consoles, ukulawula usebenzisa ikhibhodi negundane kulula. Ngenxa yalesi sizathu, kanye nabanye, kungadingeka ukuxhuma nokulungisa i-gamepad ku-PC. Ukuxhuma i-gamepad ku-PC Ngesicelo, ungakwazi ukuxhuma ikhompyutha kunoma iyiphi i-gamepad yesimanje ene-plug efanelekayo ye-USB.
Indlela yokwazi i-laptop screen diagonal
Ezimweni ezithile, umsebenzisi angadinga ulwazi mayelana nokudonsa kwesikrini kwikhompyutha ephathekayo noma ngokuqapha ikhompyutha yomuntu siqu. Njengoba kungenakuqhathaniswa yiso, naphezu kokuba khona kwezindinganiso emgodini wezinhlangothi, kusele ukubhekana nezixazululo ezihlukile kule nkinga.
I-Windows Defender Offline Defender (Windows Defender Offline)
Inguqulo entsha ye-Windows 10 inesici esakhelwe ngaphakathi "I-Definator Defender ye-Windows", evumela ukuthi uhlole ikhompyutha yakho kuma-virusi bese ususa izinhlelo ezinonya ezinzima ukususa ohlelweni olusebenzayo. Kulesi sibuyekezo - ukuthi ungasebenzisa kanjani ummeleli we-Windows 10, nokuthi ungasebenzisa kanjani i-Windows Defender Offline kuzihumusho zangaphambili ze-OS - Windows 7, 8 no-8.
Ungenza kanjani ukuvula kwamafolda nezinqamuleli ngokuchofoza okukodwa?
Sawubona Uthola umbuzo omuhle kakhulu kamuva. Ngizoyicaphuna lapha ngokugcwele. Futhi-ke, umbhalo wencwadi (okugqanyisiwe eluhlaza okwesibhakabhaka) ... Sawubona. Ngangivame ukuba nesistimu yokusebenza ye-Windows XP futhi kufakwe kuwo wonke amafolda ngokuchofoza okukodwa kwegundane, kanye nanoma yisiphi isixhumanisi kwi-inthanethi. Manje ngishintshe i-OS ku-Windows 8 futhi amafolda aqala ukuvula ngokuchofoza kabili.
Ukususa "i-Casino Volcano" kusuka kukhompyutha ku-Windows 7
Abanye abasebenzisi bayaqaphela ukuthi uma ukupheqa kuziphequluli ngokuvamile kuvulwa amasayithi anezikhangiso ze-Vulcan casino, amakhasi asekhaya ezipheqululini zewebhu ashintshele ekhasini eliyinhloko lale nsiza, futhi mhlawumbe izikhangiso ziqala ukuvela ngisho nasemsebenzini ovamile PC ngaphandle Ukufinyelela kwe-intanethi.
Lapho ungalayisha khona i-Windows 8.1 Inkampani ye-ISO (inguqulo yezinsuku ezingu-90)
Kusuka komunye wabafundi, umbuzo weza kokuthunyelwe mayelana nokuthi ungayilanda kanjani futhi isithombe sokuqala se-Windows 8.1 sampula kumshini onguchwepheshe. Futhi kubuzwa ngqo lapho kungatholakala khona kuwebhusayithi ye-Microsoft, ngoba kwakungenakwenzeka ukwenza lokhu ngokwabo. Bheka futhi Ukufaka i-Windows 8.
Ukuxazulula "Ukusebenza okuceliwe kudinga ukukhushulwa" ku-Windows 7
Uma wenza noma yimaphi imisebenzi kumhumushi we-Windows 7 noma ukuqala uhlelo lokusebenza (umdlalo wekhompyutha), umlayezo wephutha ungavela: "Umsebenzi oceliwe udinga ukwanda." Lesi simo singase senzeke noma ngabe umsebenzisi uvule isisombululo sesofthiwe namalungelo omqondisi we-OS. Ake siqale ukuxazulula le nkinga.
Indlela yokuqalisa kabusha iWindows 8
Kubonakala sengathi akukho lutho olulula kunokuqala kabusha uhlelo. Kodwa ngenxa yokuthi i-Windows 8 ine-interface esibonakalayo - iMetro - kubasebenzisi abaningi le nqubo iphakamisa imibuzo. Ngempela, endaweni evamile kwimenyu Yokuqala ayikho inkinobho yokuvala. Esihlokweni sethu, sizoxoxa ngezindlela eziningana ongaqala kabusha ikhompyutha yakho.
Ukunquma i-IP yedivayisi ngekheli le-MAC
Ikheli le-IP ledivaysi yenethiwekhi exhunyiwe liyadingeka ngumsebenzisi esimweni lapho umyalo othize uthunyelwe kulo, isibonelo, idokhumenti yokunyathelisa kuphrinta. Ngaphezu kwalokhu, kunezibonelo ezimbalwa; ngeke sibhale bonke. Ngezinye izikhathi umsebenzisi ubhekene nesimo lapho ikheli lenethiwekhi lensiza engaziwa khona, futhi kukhona ikheli lendawo kuphela, okungukuthi, ikheli le-MAC.
Iphutha 0x80070643 uma ufaka isibuyekezo sokuvuselela i-Windows Defender ku-Windows 10
Enye yeziphambeko ezingenzeka ukuthi umsebenzisi we-Windows 10 angabhekana nomlayezo "Qala kabusha incazelo ye-Windows Defender KB_NUMBER_ENALTY- iphutha 0x80070643" esikhungweni sokubuyekeza. Kulesi simo, njengomthetho, wonke ama-Windows 10 izibuyekezo afakwe ngokujwayelekile (Qaphela: uma iphutha elifanayo livela nezinye izibuyekezo, bheka
Ivumela i-RDP 7 ku-Windows 7
Kunezimo lapho udinga ukucupha i- "Ideskithophu Ekude" kwikhompyutha yakho ukuze unikeze ukufinyelela kumsebenzisi ongeke abe khona eduze kwe-PC yakho, noma ukwazi ukulawula uhlelo kusuka kwenye idivayisi. Kukhona izinhlelo ezikhethekile zenkampani yesithathu ezenza lo msebenzi, kodwa ngaphezu kwalokho, ku-Windows 7, ungakwazi ukuyixazulula usebenzisa i-protocol ye-RDP 7 eyakhelwe ngaphakathi.
I-Adobe Premiere Pro
https://termotools.com zu.termotools.com © Windows 2019